कीर्तिपुरको त्यो छ्याकटे ढुंगा
टिप्पणी विहीबार, साउन ९, २०७६
वर्तमान नेपालको नक्शा कोर्ने एउटा कडी गोरखा राज्यले कीर्तिपुरमा गरेको आक्रमणलाई उछालिरहनु औचित्यहीन काम हो।
कीर्तिपुरसँगै पृथ्वीनारायण शाहको चर्चा गर्न रुचाउने एउटा वर्ग नेपाली समाजमा छ । आफूलाई कीर्तिपुरप्रति संवेदनशील देखाउन खोज्ने उनीहरूलाई इतिहासकै कसीमा राखेर हेर्दा भने विपरीत अवस्था देखिन्छ । हरेक वर्ष २७ पुसको सेरोफेरोमा पृथ्वीनारायण शाहको चर्चा चल्छ ।
एकातिर पृथ्वी जयन्ती मनाइन्छ, अर्कातिर तीन–चार वर्षयता त्यसै दिन विरोध कार्यक्रम पनि गर्न थालिएको छ । औपचारिक कार्यक्रम नै राखेर कीर्तिपुरको एउटा छ्याकटे ढुंगामा थुक्न आमन्त्रण गर्ने गरिएको छ ।
पृथ्वीनारायण र त्यो ढुंगाबीचको साइनो बारे चर्चा गरौं ।
कीर्तिपुर निवासी यो पङ्क्तिकारले उक्त ढुंगा पृथ्वीनारायणसँग नभई गोरखाका काजी (प्रधानमन्त्री) कालु पाँडेसँग सम्बन्धित भनेर सुन्दै आएको हो । गोरखाली सेनाले पहिलो पटक कीर्तिपुरमाथि वि.सं. १८१४ मा आक्रमण गर्दा पाँडे विपक्षी सेनाद्वारा काटिएका थिए ।
उनलाई सो छ्याकटे ढुंगामा राखेर काटिएको थियो वा अन्यत्र काटेर त्यहाँ राखियो भन्ने प्रष्ट छैन । तर आक्रोश र असन्तुष्टिको भावले उहिल्यैदेखि कीर्तिपुरवासीले त्यो ढुंगामा थुक्दै आएको चाहिं सत्य हो ।
यसलाई गोरखाली आक्रमण विरोधी अभिव्यक्ति मान्न सकिन्छ । तर राजतन्त्र रहुन्जेल कालु पाँडेसँग सम्बन्धित रहेको ढुंगालाई त्यसयता भने पृथ्वीनारायणसँग जोडेर विरोध गर्नुले नेपाली समाजमा विम्बको निर्माण र विनिर्माण कसरी हुँदो रहेछ भन्ने देखाउँछ ।
पृथ्वीनारायण राजा हुनु अघिदेखि नै गोरखाले काठमाडौं उपत्यकाका तीन वटै राज्यमाथि आँखा लगाउँदै आएको थियो । कीर्तिपुर तत्कालीन पाटन राज्य अन्तर्गत थियो । गोरखाका राजकुमार हुँदै पृथ्वीनारायण भक्तपुर दरबारमा शिक्षा–दीक्षाका लागि लामो समयसम्म बसेका थिए ।
उनी गोरखाको राजगद्दीमा बसेपछि एकपछि अर्को प्रयास गर्दा तेस्रो पटकको आक्रमणमा ३ चैत १८२२ मा कीर्तिपुरमाथि विजय प्राप्त गरेका थिए ।
युद्ध विवरणहरू अध्ययन गर्दा कीर्तिपुर जित्न गोरखालाई ज्यादै चुनौतीपूर्ण भयो । पहिलो र दोस्रो युद्ध कीर्तिपुरको गढ पर्खाल बाहिर पाटन र कान्तिपुरको संयुक्त सेनासँग भएको थियो भने तेस्रोमा मात्रै कीर्तिपुरका सर्वसाधारणले पनि वीरतापूर्वक लडेको बुझिन्छ । लडाइँका क्रममा गोरखाले काजी कालु पाँडे गुमायो भने पृथ्वीनारायणका भाइ सुरप्रतापको आँखा फुट्यो ।
कीर्तिपुर हात पार्न अन्य राज्य जित्न भन्दा बढी प्रयास गर्नुपरेको र ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको प्रतिशोधको भावनाले गोरखालीहरू क्रूद्ध हुन पुगे । यसै क्रममा पराजित कीर्तिपुरका जनताको नाक र ओठ काटेको कुरा इतिहाससिद्ध कुरा हो ।
नाक काटेको हो कि होइन भन्नेबारे बेलाबेला तर्क–वितर्क चल्ने गरे पनि यस विषयमा तत्कालीन सत्ता पक्षकै साहित्यमा गरिएको चर्चाले पुष्टि गरेको छ ।
पृथ्वीनारायणका दरबारिया पण्डित ललितावल्लभले वि.सं. १८२७ मा लेखेको ‘पृथ्वीन्द्रवर्णोदय’ काव्यमा राजाको तारिफ गर्दै कीर्तिपुरमा केही विरोधीहरूको नाक काटिदिएको उल्लेख पाइन्छ । यस बाहेक पनि भाषा वंशावली, राजभोग वंशावली लगायतमा कीर्तिपुरमा १२ वर्षमाथिका सर्वसाधारणको नाक काटिदिएको वर्णन भेटिन्छ ।
इतिहासका अन्य सामग्री अध्ययन गर्दा गोरखाली सेनाले कीर्तिपुरमा मात्रै नभई युद्धका क्रममा पूर्व तथा पश्चिम सबै ठाउँमा उत्पात मच्चाएको पाइन्छ । तर कीर्तिपुरको मात्रै चर्चा हुने गरेको छ । विभिन्न समयमा राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई कीर्तिपुरवासीको सहानुभूति बटुल्न र सत्ता पक्ष विरुद्ध जनमत बनाउन गोरखाली सेनाको ज्यादतीको बयान गतिलो माध्यम बन्दै आएको छ ।
कीर्तिपुरमा गोरखाली सेनाको आक्रमण इतिहासको एउटा अध्याय हो । यस्तै अध्यायहरूबाटै वर्तमान नेपालको निर्माण भएको हो । वर्तमान नेपालको भूराजनीतिक संरचनाप्रति केही आपत्ति नभएको अवस्थामा त्यो कीर्तिपुर युद्धलाई उछाल्नु अर्थहीन काम हो ।
निश्चित व्यक्ति/समूहले राजनीतिक फाइदाका लागि युद्धको त्यो समय सम्झउने र सत्ता विरुद्ध प्रयोग गर्न उक्साउने कार्यले कीर्तिपुरकै छविमा प्रतिकूल असर परिरहेकोमा कीर्तिपुरवासी नै सजग हुनुपर्छ ।
कालु पाँडेसँग सम्बन्धित छ्याकटे ढुंगालाई थुक्ने वा नथुक्ने कुरामा हस्तक्षेप वा आक्षेप गर्नुभन्दा यसलाई इतिहासको एउटा पक्ष मान्नु उचित हुन्छ । यसैलाई पृथ्वीनारायणसँग जोडेर प्रस्तुत गर्नु चाहिं पूर्वाग्रही सोच हो ।